Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Waxbarashada Puntlland oo u dhoofay Muqdisho
November 25, 2011 - Written by
Garoowe:- Waxaa maanta ka dhoofay Garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe Wafdi balaaran oo iskugu jira wasiiro ,Isimo iyo Xilibaano ka tirsan Golaha wakiilada ee dowllada Puntlland. Wafdiga maanta u dhoofay magaalada Muqdisho ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka waxbarashada ee dowllada Puntlland Cabdi Faarax Juxaa, Wafdigaan oo ka kooban ilaa 11 xubnooda ayaa waxaa uu ka qayb geli doonaa shir looga doodi doono Roadmap-ka kaas oo la filayo in uu furmo maalinra beri ah oo taariikhdu tahay 26/11/2011.
Wafdigaan uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada ee dowllada Puntlland Cabdi Faarax Juxaa ayaa waxaa socdaalkooda ku weheliya Wasiir ku xigeenka Wasaaradda howlaha guud Cabdishakuur Mire Aadan ,Garaad Cabdullaahi Cali Ciid,Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin.
Wasiirka waxbara shada ee dowllada Puntlland Cabdi Faarax Juxaa oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in safarka ay ku tegayaan magaalada Muqdisho ay u jeedadiisu ay tahay in ay ka qaýb galaan shir lagu lafagurayo Roadmap-ka iyadoo sidoo kale wasiirku uu sheegay in ay jiri doonaa shirar kale oo looga hadli doono shirka wadatashiga ah ee la filayo in qaybtiisa 2aad uu ka dhici doono magaaalada Garoowe.
Wasiirka waxbarashada ee dowllada Puntlland Cabdi Faarax Juxaa ayaa xusay in shirka looga hadlayo Roadmap-ka ay ka soo qayb geli doonaa bulshada rayidka ,Wufuud ka socda beesha caalamka iyo weliba Ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan Dr Mahiga, shirkaan ayaa waxaa uu socon doonaa ilaa saddex maalmood.